သက်ဝေ: သီရိလင်္ကာ ခရီးစဉ် (၅)
Sonata Cantata April 20, 2014 at 8:00 PM
ဘီလူးကြီးလို ဒူးနှစ်ဘက်ခွင် ခြေဖနောင့်နဲ့ ထောက်ပြီး လိုက်ခဲ့တယ်နော်...:D
mabaydar April 20, 2014 at 11:10 PM
ဘယ်နှရက်တောင် နေခဲ့တာလဲ? ဓာတ်ပုံတွေအတော်လှတယ်.... ကမ္ဘာ့အချိုဆုံး လဘက်ရည်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်က လဘက်ရည်ထက်တောင် ချိုတယ်ပေါ့? ဒီပိုစ့်တွေဖတ်ပြီး သီရိလကာင်္သွားချင်စိတ်လဲပေါက်လာသလို သွားဖြစ်ရင်လဲ ထပ်လာဖတ်ဖြစ်အုံးမှာ သေချာတယ်...
Ko Kyaw Oo April 21, 2014 at 7:16 AM
ေ နွ ဦးကခြောက်သွေ့ သ လို ထ င် ရပေ မ ယ့်
သူ့ န ည်းသူ့ ဟ န် နဲ့တော့ သိ ပ် လှနေ တာပါ ပဲ ဆို တာရ ယ်
တိ မ်တွေ က သိ ပ် လှ တာပဲ လို့ ကို ယ်ပြောရ င်
မ င်းယုံ လို က် ပါ ဆို တာရ ယ်တော်တော် မို က် ပါ တ ယ်
ေ တာင်ပေါ် လ ဖ က် ခ င်းေ တွ ကို
မ ယ် သီ တာခိုးတာဘ ယ် သူ လဲ ဆို တဲ့ သီ ချ င်းနားထောင် ရ င်း
သွား ကြ တာေ ပါ့လေ
Ousai April 21, 2014 at 11:55 AM
Thanks for sharing. Looking forward to read more.
Cameron April 22, 2014 at 2:59 PM
တန်ခူး April 27, 2014 at 11:12 PM
သက်ဝေပို့ စ်တွေကြောင့် ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ သီရိလင်္ကာရောက်သွားပြီ. သူတို့ ဆီမှာလဲ စက်တော်ရာရှိတယ်နော်. လမ်းလေးတွေကလဲသာသာယာယာ. ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ
သီရိလင်္ကာတောင် သွားချင်သလိုလို ဖြစ်လာ။
Mrs. Bagel April 30, 2014 at 11:49 PM
It's been episode5and haven't skippedapost about Sri lanka :)
blackroze August 5, 2014 at 2:09 AM
တောင်တက်လမ်းကလေးတွေ တွေ့တော့ တောင်ကြီး အတက်လမ်းကို ပြန်သတိရမိတယ်..